गुगल नक्शा र सडक दृश्यमा यूटीएम निर्देशांक हेर्नुहोस् - जिओफुमाडास
Google नक्सा र सडक दृश्यमा UTM समन्वयहरू हेर्नुहोस्
जुन, 2019 गुगल अर्थ / नक्सा
चरण १. डेटा फीड टेम्प्लेट डाउनलोड गर्नुहोस्। यद्यपि लेख UTM निर्देशांकमा केन्द्रित छ, अनुप्रयोगसँग अक्षांश र देशान्तर टेम्प्लेटहरू दशमलव डिग्रीको साथसाथै डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड ढाँचामा छ।
चरण २. टेम्पलेट अपलोड गर्नुहोस्। डाटासँग टेम्प्लेट चयन गरेर, प्रणालीलाई प्रमाणिकरण गर्न सकिँदैन भने त्यहाँ डेटा सचेत हुनेछ; यी मान्यताहरूमा यी समावेश छन्:
यदि समकक्ष स्तम्भ खाली छन् भने
यदि समकक्षहरू गैर-सांख्यिक क्षेत्रहरू छन् भने
यदि जोनहरू 1 र 60 बीचमा छैनन्
यदि गोलार्ध क्षेत्र भने उत्तर वा दक्षिण भन्दा फरक छ।
लेटलँग निर्देशाin्गहरूको मामलामा, यो मान्य छ कि अक्षांशहरू 90 डिग्री भन्दा बढी हुँदैन वा देशान्तर 180 भन्दा बढी हुँदैन।
वर्णन डाटा html सामग्री समर्थन गर्दछ, उदाहरण को लागी एक छवि को प्रदर्शन शामिल एक मा देखाइएको जस्तै। यसले अझै पनि चीजहरू समर्थन गर्दछ जस्तै इन्टर्नेटमा मार्गहरू वा कम्प्युटरको स्थानीय डिस्क, भिडियोहरू, वा कुनै पनि धनी सामग्रीमा लिंक।
चरण the. तालिका र नक्सामा डाटा दृश्यात्मक गर्नुहोस्।
तुरुन्तै डेटा अपलोड गरिएको छ, तालिकाले अल्फान्युमेरिक डाटा र भौगोलिक स्थानमा नक्सा देखाउनेछ; तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ, अपलोड प्रक्रियाले यी समकक्षहरूको परिवर्तनलाई Google नक्सा द्वारा आवश्यक रूपमा भौगोलिक ढाँचामा समावेश गर्दछ।
नक्सामा प्रतिमा तान्नुहोस्, तपाईंले सडक दृश्यहरूको पूर्वावलोकन वा प्रयोगकर्ता द्वारा अपलोड गरिएको 360 हेराइहरू पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुनेछ।
आइकन रिलिज भएपछि, गुगल सडक दृश्यमा राखिएको पोइन्टहरू यसमा हेर्न र नेभिगेट गर्न सकिन्छ। आइकनहरूमा क्लिक गरेर तपाईं विवरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
चरण map. नक्सा निर्देशांक प्राप्त गर्नुहोस्। पोइन्ट्स खाली टेबलमा वा एक्सेलबाट अपलोड गरिएकोमा थप्न सकिन्छ; निर्देशांकहरू त्यो टेम्प्लेटको आधारमा प्रदर्शित हुनेछ, स्वत: लेबल स्तम्भ नम्बरिंग र नक्साबाट प्राप्त गरिएको विवरणमा थप्दै।
यहाँ तपाईंले भिडियोमा काम गर्ने टेम्पलेट हेर्न सक्नुहुन्छ।
Gtools सेवा प्रयोग गरी KML नक्सा वा तालिका एक्सेलमा डाउनलोड गर्नुहोस्।
तपाईं डाउनलोड कोड प्रविष्ट गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईंसँग फाईल जुन तपाईं गुगल अर्थ वा कुनै GIS प्रोग्राममा अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ; एप्लिकेसनले देखाउँदछ कि डाउनलोड कोड कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ जसको साथ तपाईं download०० पटक डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै डाउनलोडमा gtools एपीआई प्रयोग गरेर प्रत्येक डाउनलोडमा कति भेरिक्सहरू छन् भन्ने सीमा छैन। नक्शाले Google Gooogle Earth बाट समन्वय मात्र देखाउँदछ, तीन-आयामी मोडल दृश्यहरू सक्रियको साथ।
किलोमिटरको अतिरिक्त तपाईं UTM मा अक्षांश / देशान्तर दशमलव, डिग्री / मिनेट / सेकेन्ड र dxf मा AutoCAD वा माइक्रोस्टेशनको साथ खोल्नको लागि एक्सेल ढाँचा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
निम्न भिडियोमा तपाई कसरी डेटा र अनुप्रयोगका अन्य सुविधाहरू डाउनलोड गरिएको हेर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ तपाईंले यो सेवा हेर्न सक्नुहुन्छ पूरा पृष्ठमा.
Google धरती KML घातक लागि कार्यालय
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो ArcGIS प्रो डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्
अर्को पोस्ट सेल फोन ट्र्याक गर्न चरणहरूअर्को »
२ जवाफ "Google नक्सा र सडक दृश्यमा UTM निर्देशांक हेर्नुहोस्" लाई जवाफ।
जुलाई, 2019 बजे
नमस्कार, स्पेनबाट शुभ बिहानी।
चाखलाग्दो अनुप्रयोग, अनुमानित डेटा हुनको लागि।
यदि सहि डाटा वा निर्देशांक आवश्यक छ भने, योग्य पेशेवरहरूले प्रयोग गरेको टोपोग्राफिक उपकरणहरू प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ।
त्यसोभए यो पनि हुन सक्छ कि छवि पुरानो हो र खोजी गरिएको डाटा अब छैन वा सारियो। तपाईंले मिति हेर्नुपर्नेछ जब गुगल "बित्यो"।
जून, 2019 बजे
एक्सेलमा कसरी र कहाँ सेट रोमानियाको लागि 35T क्षेत्र फाइल गर्नुहुन्छ? मेरो लागि काम गरिरहेको छैन। यदि मैले 35 राख्दछु भने मात्र मेरो समन्वयित नेरा मध्य अफ्रिका देखाउँदछ?